DF oo qareenno u diiday wariyaasha Universal & culees lagu kordhiyay Cawil Daahir iyo Kulmiye | Caasimada Online
Home Warar DF oo qareenno u diiday wariyaasha Universal & culees lagu kordhiyay Cawil...
DF oo qareenno u diiday wariyaasha Universal & culees lagu kordhiyay Cawil Daahir iyo Kulmiye
Muqdisho (Caasimada Online) – Qaar kamid ah shaqaalaha Tv-ga Universal ayaa xog dheeraad ah ka bixiyay dhibaatooyin ay kala kulmeen hayada nabad sugida iyo laamaha amaanka dowlada Soomalaiya.
Madaxda wararka Universaltv C/casiis Ibraahim Axmed “Ok”, oo saxaafada la hadlay ayaa sheegay in loo diiday iney qabsadaan qareen u dacwooda wariyaasha la shaqeyn jiray ee xiran.
Sidoo kale wariye C/casiis, ayaa sheegay iney laamaha amaanka ka maqleen warar la xiriira in muddo 21 maalin ah ay xirnaan doonaan wariye Cawil Daahir Salaad iyo C/laahi Xersi Kulmiye.
Wuxuu sheegay in wariyaasha iyo muwaadin kasta oo Soomaaliyeed uu xaq u leeyahay inuu xabsiga ku xirnaado kaliya 24 saac, laakiin taasi aysan ka jirin magaalada Muqdisho.
Wariyaha ayaa sidoo kale sheegay iney yihiin dad Dulmoon, maadaama loo diiday iney qabsadaan qareeno u doodo oo ay kasoo horjeesteen laamaha amaanka ee dowlada Soomaaliya, taasina ay tahay caqabad cusub oo wariyaasha heysata.
Hayada Nabad Sugida Soomaaliya ayaa cadaadis xoogan sartay TV-ga waxaana laga joojiyay guud ahaan shaqadii ay ka wadeen magaalada Muqdisho.